‘बजेटले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेन’ - Aarthiknews
विहीबार, २२ जेठ २०७७ Thursday, 04 June, 2020
‘बजेटले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेन’
विहीबार, १६ जेठ २०७६
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले समग्र रुपमा नेपालको संविधानले र्निदिस्ट गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिलाई समेटेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षका बिषयहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरण र श्रमलाई पनि मौलिक अधिकारको रुपमा हामीले स्थापित गरेका छौं । सो बिषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट अलिकति वितरणमुखी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले नै त्यो अपेक्षा गरेको कारण सामाजिक बिषय समावेश गर्नु उपयुक्त नै जस्तो देखिन्छ ।
बजेटको आकारलाई हेरेर कुरा गर्नुपर्दा अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट थियो भने यो वर्ष करिब १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट आएको छ । पुँजीगत खर्च २६ दशमलब ६ प्रतिशत पुग्नु राम्रो पक्ष हो । चालू आवमा आजसम्म पुँजीगत खर्च ४३ दशमलब ८१ प्रतिशतले मात्र खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा बजेटको आकार बढाउँदैमा ठिक भयो, राम्रो भयो भन्ने पनि होइन । तथापि, बजेटमा अर्थमन्त्रीले ढुक्कैसँग चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ८६ दशमलब ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गर्नु भएको छ ।
यो अनुमानको अर्थ यो हो कि अहिले ४३ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र रहेको पुँजीगत खर्चलाई अब करिब डेढ महिनाभित्रमा दोब्बर बनाउने हो । भन्नुको मतलब छोटो समयमा ठूलो खर्च गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यसले गरेको इंकित यो हो कि हामी पुरानै प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छौं ।
बजेटको सकारात्मक पाटो के हो भने यो बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा संचालन गरिने भनिएको छ । यसको मतलब हाम्रो केन्द्रीय सरकार पनि वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर छ । सरकार यो कुरामा जुझारु रुपले अघि बढिरहेको भन्ने देखिन्छ । तर, प्रांगारिक मल, कौसी खेती, आलु र प्याजका योजना देख्दा चाहिं हामीले अझै पनि संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ ।
समग्रमा भन्दा हामीले वित्तीय संघीयता लागू गरिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न जुन संरचना चाहिन्थ्यो त्यो तयार नगरिकन बजेट घोषणा भयो । यो बजेट भोलि कार्यन्वयन गर्नको लागि वित्तीय संघीयतामा आधारित संरचना अनिवार्य हुन्छ । के हामीले त्यसो गरेका छौं ? हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको छ ?हामीले प्राप्त गर्यौं भनिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तल्लो तहको जनताले समेत महशुस गर्ने गरी वितरण गर्न सकेका छौं ? यी प्रश्नहरु अझै पनि यो बजेटको सेरोफेरोबाट अनुत्तरित नै रहेका छन् ।
तातोपानीबाट उठ्यो एक अर्ब २७ करोड २६ लाखको राजश्व
अनलाइनबाटै कर यसरी तिर्न सकिने
'लकडाउन' मोडालिटी परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
लकडाउनबारे विज्ञसँग छलफल गर्दै प्रम ओली
सरकारको निर्णय एक दिन पनि टिकेन, कर चुक्ता गर्ने समय थपियो (सूचनासहित)
सरकार कर तिर्ने समय थप्न तयार, सक्नेलाई तुरुन्तै तिराइने
मिर्गौला र मुटुको निःशुल्क उपचार सेवा बन्द गर्ने
लकडाउन उल्लघंन बढेपछि उपत्यकाका प्रशासनकाे आकस्मिक बैठक
सारथीसँग गाभिन लागेको नयाँ नेपालले बोलायो विशेष साधारण सभा
थोक बजार खुल्याे
भारतका रक्षा सचिवलाई कोरोना संक्रमण
ब्याज अनुदानबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी
नर्सको रोदनबारे केएमसी प्रमुखको स्पष्टोक्ति- सकेको गर्दैछौं, डरको औषधि हुँदैन
चक्रवात ‘निसर्ग’ को प्रभावः देशभर बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना
‘सबै स्तरका ग्राहकलाई समेट्न नै विभिन्न ब्राण्डको सामान भित्र्याएका छौं’
प्रदर्शनकारीको अगाडि अमेरिकी प्रहरीले घुँडा टेकेर माफी मागे
साना व्यवसायीको सरकारलाई चुनौती, भोलि ११ बजेसम्म सबै पसल खोल्ने
कोरोना जितेका बैतडीका युवक कारागार चलान
सरकारले यसरी परिचालन गर्यो सेना
सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेपछि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकार
सरकारको निर्णय राष्ट्र बैंकलाई थाहा छैन !
थपिए २०१ जना कोरोना संक्रमित
तरकारी खेतीः खेतबारीमा मात्रै होइन कौसीमा पनि फलाउने भान्सामा पकाउने
थप ११४ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ८८६ पुग्यो
ट्रम्पले कोरोनाबाट जोगिन यसकारण मलेरियाको औषधि खान शुरु गरे
सुनको मूल्य दुई महिनामा १० हजार वृद्धि, सुन बेचेर घर चलाउने बढे